Njengoba leso sikhathi wathi enkosini u-Alexander III, IRussia umbimbi ezimbili kuphela: kwezempi lasolwandle. Ngempela, kusukela Petr Veliky waphenduka izwe lakithi ngamandla amakhulu olwandle, amatilosi lempi, ezigunyaza officer, Admirals nezinduna zonke zezikhulu abaye baba nendima enkulu emlandweni walo. Ukuze siqonde kokufaneleka yabo phakathi neMpi Yezwe II, imiklomelo ekhethekile Kwamiswa: indondo Nakhimov Medal of Ushakov. Namuhla ziseZwini imikhaya eminingi Russian futhi faleristov ezizimele emhlabeni wonke.
A amazwi ambalwa mayelana Admiral
Ngaphambi kokucabangela izindondo Ushakov aqambe kafushane ngendoda behlonipha kabani sekamisiwe, ikakhulu ngoba ingenye nabantu abavelele kakhulu ojenene Russian futhi Admirals.
Fyodor Ushakov waqala ibhola lakhe ne iqhaza empini Russian-Turkish, okwaholela ukuzimela YaseCrimea kusuka Turkey kanye ekunqotshweni Russia Azov futhi Kerch inqaba. Babeye iwine eminingi izimpi kolwandle, lapho wazehlukanisa njengenhlangano owaleli kakhulu. Ngaphezu kwalokho, Ushakov kwesokunxele memory okuhle izizwe isiGreki Bulgarian futhi lasetshenziswa njengoba usomaqhinga afundiswe ukusungulwa iziqhingi ngesiGreki weRiphabhulikhi ezimele, futhi yokukhululwa Italy.
Lapho ethatha umhlalaphansi yakhe, wayefunda wahlanganyela esiza abantulayo. Ikakhulukazi, ngezindleko zakhe siqu Ushakov eyakhelwe esibhedlela ngonyaka 1812 Veterans impi futhi asekelwe Sanaksar Isigodlo, lapho ngisho kwadingeka esitokisini sakhe, lapho ayehlala phakathi babezila ukudla. Ukuzinikela okunjalo ukuvumele Lobu-Orthodox LaseRussia ukuze uhlukanise kuye saint kanye ezifana amaqhawe ngakhethi like Alexander saseNevsky futhi Dmitry Donskoy.
Medal of Ushakov: ngubani inikezwa
Isinqumo ku ukusungulwa le ndondo wakhishwa Mashi 3, 1944. Yayihloselwe ukuhlonipha amasosha amatilosi, sergeants nezikhulu ezincane kanye amaphoyisa futhi ugunyaza nezikhonzi Navy nezigaba Marine umngcele onogada ngoba isibindi siqu nesibindI eyayibonakala owabonakaliswa olwandle ngivikele wobaba ngesikhathi sempi futhi nenkathi yokuthula.
Medal Ushakov (USSR) senziwa esiliva ngesimo umbuthano kokuba ububanzi 3.6 cm, esikhulu ihange. On obverse yayo lizungezwe usebe convex, ibekwe impumuzo isithombe ngokudayisa Admiral F. F. Ushakova. Ngenhla ke circumferentially isicelo umbhalo oqoshiwe ayizindunduma "Admiral Ushakov" futhi ngaphansi portrait - umfire 2 amagatsha ezihambisana ukugqagqana-tape. Ngokuqondene reverse, khona-ke nje wangqongqoza inombolo indondo. Vuza usebenzisa indandatho amancane ixhunywe ithebhu 5 carbon block, embozwe esiluhlaza usilika iribhoni. ububanzi - 2.4 cm, futhi eduze kwasemaphethelweni imivimbo yakhe okumhlophe nokuluhlaza ezinyathelisiwe.
Medal of Ushakov has umehluko eliyisisekelo kusuka kwamanye imiklomelo Russian. Iqiniso lokuthi izicathulo zakhe lihlotshiswe i chain ihange, yanamathela phezulu tape nokuxhuma emagumbini phezulu izicathulo ne eyelet. Lo mklamo ayitholakalanga yimuphi omunye izindondo Soviet.
Indondo yanikezwa lisungulwe kabusha nga-ngesinqumo somthetho omongameli Mashi 1994. Ngaphandle, lifana ncamashi ngendondo Ushakova WWII, futhi namuhla unikelwa amasosha Navy futhi ugu unogada iziphathimandla FSB Border Service Russian Federation. Kuyadingeka ukugqoka ohlangothini lwesobunxele kwesifuba, futhi uma kukhona nezinye umklomelo izindondo we Russian Federation, uthathwa ngendondo Suvorova.
Lo mklomelo wasungulwa ngesikhathi esisodwa Ushakov wasebusika futhi senzelwe kwabasebenzi neofitserskogo VMG nolwandle amayunithi amabutho emngceleni, babonisa isibindi njengezakhamuzi nesibindI ekwenzeni empini.
Wazenza ngethusi ngesimo umbuthano 3.6 mm ububanzi. I obverse lwemali Nakhimova isicelo ayizindunduma isithombe Admiral kwiphrofayli, ngezansi zazo wahlela sawela amagatsha umfire ixhumeke inkanyezi ezinhlanu olucijile. Kanye usebe convex, kabili amaphuzu impumuzo phezulu uhlamvu lwemali, umbhalo Ulungise "Admiral Nakhimov". Ngalesi umklomelo inedizayini reverse, engesiyo ejwayelekile esingashintshi kuze kufinyelelwe esikhathini seMpi yoMhlaba yesiBili izindondo. Ikakhulu, ikhombisa kumbuthano futhi ngaphakathi kuwo - elintantayo ku amagagasi badayisa isikebhe, kulandele izikhonkwane ezimbili ulwandle zihlangene. Ukuqhela ohlangothini kumbuthano okubangelwa impumuzo ngesimo uchungechunge lomkhumbi.
Eyokuqala Nakhimov indondo Ukuklonyeliswa senzeka ngesikhathi Northern Fleet has 10 Apreli 1944. Its got uSergeant MA Kolosov kanye amatilosi E. uqweqwe FG Moshkov. Inani 1981 13,000 abantu baklonyeliswa USSR indondo Nakhimov.
Medal US nase-UK Veterans
Ngo-2012, behlonipha weminyaka engu-70 kusukela ekuqaleni kwe-Arctic ngohide uhulumeni waseRussia, kwanqunywa ukuba uqaphele kokufaneleka iqhaza zabo. Njengoba umvuzo, yena wakhethwa Medal of Ushakov. uhlu Prize wathunyelwa e-US nase-UK, lapho ezihlongozwayo ukuhlela emcimbini onesizotha iqhaza osomaqhinga Russian. Ngawo lowo nyaka, ngo-April 27, e-United States 56 amatilosi Veterans kwanikezelwa izindondo Ushakov. Okuningi nzima Bekunjalo amalungu Arctic ngohide ezazivela eBrithani. Iqiniso lokuthi imithetho izifundo kuleli zwe sika wakhe seNkosi YaseBrithani banqatshelwe ngokwamukela imiklomelo angaphandle, sicela ngakho ohlangothini Russian sinqatshelwe. Ngesikhathi esifanayo lo British esungulwe umklomelo ayo for Veterans yayo ngokuthi 'Arctic Star ". Nokho, ngemva kokwethula uhulumeni waseBrithani isishintshe umqondo, futhi izindondo Russian okwamanje eseyiswa London ne-Edinburgh. Kukhona okwenzeka emcimbini emisiwe yokunikeza amatilosi anesibindi owabhala la mazwi eminyakeni engu-70 edlule alethwe lempi ezibalulekile futhi wezimpahla ukudla ukuze Murmansk futhi Arkhangelsk.
Medal of Ushakov: Intengo
Faleristics kuyinto wokuzilibazisa othandwa kakhulu emhlabeni, ngakho imiklomelo Russian ngokuvamile ezingxenyeni ezihlukahlukene zomhlaba. Phakathi kwabo muva wathatha wasebusika Admiral Ushakov, esibonakala by mklamo ongavamile akhiwa wezakhiwo MA Shepilevskim. Intengo yale umklomelo kuhluka ruble 120,000 ukuze 130,000. Cishe izindleko ezifanayo futhi indondo Nakhimov. Njengoba for amakhophi abo, intengo - ruble mayelana 1000.
Manje uyazi ukuthi ibukeke izindondo Ushakov nowayekhona umuntu etholakele udumo bona Kwamiswa.
I Lisbon sivumelwano
"IRed Army iqembu": incazelo, umlando kanye namaqiniso ezithakazelisayo
Ukuchazwa kwamaphupho engavamile, noma ukuthi kusho ukuncelisa ephusheni?
Ingabe itiye eluhlaza ukwandisa intelligence yokwelapha izifo?